पद नायव सुब्बाः २९ वर्षे जागिर अवधिमा १९ करोड कमाई, कहाँबाट आयो यत्रो रकम ? – PathivaraOnline
Home > बिजनेस > पद नायव सुब्बाः २९ वर्षे जागिर अवधिमा १९ करोड कमाई, कहाँबाट आयो यत्रो रकम ?
admin January 19, 2020 बिजनेस, समाचार	0
प्रेमसम्बन्ध टुटेको लामोसमयपछि रणवीरबारे क्याटरीनाले गरिन् यस्तो खुलासा
एजेन्सी – बलिउडकी निकै चर्चित अभिनेत्री हुन् क्याटरीना कैफ । धेरैजसो नयाँ फिल्म र फोटोसुटका कारण चर्चामा आउने क्याटरीना बलिउडकी एक अभिनेत्री हुन् । उनले हालै एक अन्तवार्तामा रणवीर कपूर बारे केही कुरा खुलाएकी छिन् । उनले एक अन्तवतार्तामा रणवीरबारे एक कुरा खुलासा गरेकी हुन् । उनलाई अन्तवार्तामा सोधियो के उनी ती व्यक्तिलाई ख्याल गर्छिन्, जसले फेक खाता प्रयोग गर्ने गर्छन् रु । उनले भनिन नाई ।
भनिन् मैले त फेक खाताको एकाउन्ट प्रयोग गर्दिन तर मलाई थाहा छ कि, रणवीरले फेक खाता प्रयोग गर्ने गर्छन्, ताकि उनी सबैको बारेमा जान्न सकून् ।’ उनले अन्तवार्तामा रण्वीरले आफुलाई इन्स्टाग्राम सिकाएको पनि बताइन् ।
बिश्व चर्चित गायक जस्टिन बीबर गम्भीर रोगबाट पीडित, आफैले गरे खुलासा
काठमाडौं – विश्वव्यापी रूपमा फ्यान फलोईङ भएका गायक जस्टिन बीबरलाई नचिन्ने कमै होलान् । गायक जस्टिन अहिले गम्भीर रोगसँग लडिरहेका छन् आफु रोगसँग लडिरहेको बारे गायक जस्टिनले खुलासा गरेका हुन् । हालै एक अन्तावार्तामा उनले आफ्नो रोगबारे बताएका हुन् ।
उनले अन्तवार्तामा आफुलाई ‘लाइम डिजीज’ नामको एक दुर्लभ रोग लागेको बताए । सामाजिक सञ्जाल इन्स्ट्राग्रममा आफुलाई लागेको रोगबारे बताउदै उनले लेखेका छन् धेरै व्यक्तिहरु भन्दै थिए कि जस्टिन बिबर एकदम फोहोर देखिएको छ, तर म बिरामी छु भन्ने कुरा देख्न सकेनन्। हालसालै मेरो शरीरमा ‘लाइम डिजीज’ देखा परेको छ।
यति मात्र नभई ‘क्रोनिक मोनो ‘को पनि सीरियस केस थियो। जसको कारण मेरो छाला, दिमाग, शरीरको उर्जा र समग्र स्वास्थ्य यस रोगबाट प्रभावित भएको छ।’ उनले अन्तवार्तामा यस रोग को बारेमा चाडै नै ‘डक्यूमेंट्री सीरीज’ निकाल्ने बताएका छन् ।
नेपालकै इतिहासमै पहिलोपटक प्रधानमन्त्री ओलिलाई देउवाले दिए दह्रो साथ, सबै नेता र जनता चकित…
ओली भन्छन्ः बाँचिएला भन्नेसमेत आश थिएन, प्रधानमन्त्री हुने कुरा सोच्ने त कुरै भएन!
प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिएका डन चरीकी प्रेमिकाको मलेसियाबाट आयो यस्तो खबर